Ubuntu keygen serial installer + kutsemuka | Linux Vakapindwa muropa
edumix | | General, Linux vs. Windows
Mune uno mukana, ndiri kuenda kukuudza nezve maviri mamiriro maererano neWindows neLinux izvo zvakandibata.
Mamiriro 1: Mukati meDatabases (ekutanga mazano uye manejimendi ehukama dhatabhesi, ine Microsoft SQL Server hongu)
Waunodzidza naye: - Ayy handisi kufamba!
N @ ty: - Iwe unofanirwa kuisa iyo .NET fomati ...
Waunodzidza naye: - Uye chii ichocho?
N @ ty: - Aahh ehh… handina chokwadi, asi Windows inoida kuti iise iyo SQL Server.
Waunodzidza naye: - Ah tarisa. Uye chii chinonzi Windows? Inobva kupi?
N @ ty: - Iyo inoshanda sisitimu uye inotengwa ...
Course shamwari: - Chokwadi, iyo inouya nePC.
N @ ty: - Kwete kwete, kwete nguva dzose, mamwe maPC anouya neLinux.
N @ ty: -: kuvhunduka: Imwe sisitimu inoshanda.
Kosi shamwari: - Uye inouya neWindows here?
Ndinofanira kutaura kuti kunyangwe ndichiedza kwazvo, pandakasvika kubasa ndakaseka zvakanyanya. Ipapo ndakasiya chikoro, uye zvirokwazvo ndakarasikirwa nemimwe mibvunzo yakawanda inofadza. Benzi, iyo kosi yaive mugodhi wegoridhe: razz:
Mamiriro 2: Mu "Moderators Chikoro" cheForoblogger vane esty (uyo aiona nezve kundidzidzisa).
esty: - Ikoko ndakakusiira zvimwe zvekutumira kuti uve pakati nepakati, ita chokwadi chekutaura mutemo uri kutyorwa uye nekuisa nzira yaunofanirwa kuita nayo.
N @ ty: - Ok, zvakanaka ...
Uye pakati pezvinyorwa ndinowana chimwe chinhu chakafanana neichi:
Che, ini ndichangobva kurodha pasi Ubuntu, pane chero munhu ane kutyora kuti andipfuure?
Pane imwe nguva ini ndaigona kumira kuseka, ndakaigadzirisa iyo kutyora mitemo, uye kuseka pamusoro payo. Kutsemuka kweUbuntu. Chinhu chinonakidza.
Zvese izvi zvakauya mundangariro mushure mekuverenga imwe yemashoko aRicardo mune iyi post; Ndinokutora mazwi:
«... ndanga ndichitsvaga kwemaawa iyo Ubuntu inosimudza uye handina kuwana, ndinofanira kuti ndine moyo murefu, huya, makore achishandisa windows anoshandisa chero moyo murefu nematambudziko ese aanokupa; kune rimwe divi ini ndichakuudza kuti ndiri kurodha mukati me linux mint 5 iyo yakazondigonesa uye inounza bhuku rayo rekumisikidza, ini ndichariisa, ndidzidze uye ndipe maonero angu ... »
Izvo zvakaita kuti ndishamise kuti tsika yakadzika sei hwindo pakati pedu.
Pfungwa yeiyo yekuisa ine musoro uye inonzwisisika, nekuti kubvira patakatanga kushandisa pc (muWindows, zviripachena) tinoziva kuti software yatiri kuda ichawanikwa mumatanho mana akapusa:
Pinda kutsemuka kwechirongwa (zvinosuruvarisa zvekupedzisira ..);
Inotevera-inotevera-inotevera-inotevera kasingaverengeki nguva usingaverenge zvachose, zvachose, zvese zvinoitwa ipapo.
Ini ndasvika pakuziva kuti, kune vanhu vazhinji, Windows ndiyo inoita kuti pc ikwekwe. Chero mutambo, kunyorera kana kubatsirwa kunogona kuwanikwa kubva mairi kuchaitirwa munzvimbo yakakura yeWindows. Mamwe mafomu ehupenyu pakombuta anoonekwa seanoshanda kana ari pasi pemahwindo, neimwe nzira chimwe chinhu hachina kunaka.
Uye zvino zvandinofunga nezvazvo, chimwe chinhu hachina kunaka.
Tsvaga muGoogle "ubuntu installer»Uye kuona izvi kumuka hakuna kunaka:
Kusiya joke iri nyore: razz:, ngatidzokere kune chaicho mutsara wepasi.
Sei vanhu vasingazive kuti Linux inzira yekushandisa, kunyangwe vangave vakazvinzwa ichinzi? Zvinoitika sei kuti hazvizivikanwe kuti Ubuntu haidi kutsemuka, kana mugadziri senge iwo ari muWindows? Icho chakanyatso kuitirwa kugadzira iyo inoshanda sisitimu iyo ndeye munhu wese, kana ichave iri bhenefiti yevashoma zvachose?
Naizvozvo, pamwe chete nesy uye zvinyorwa chaizvo chete nemanyuko, isu tinoedza kubva kunzvimbo yedu diki kusvika kuvanhu vazhinji sezvinobvira mukana zviri nyore kuLinux, pasina mazwi akaomarara kana tsananguro zvinongonzwisisika nemasayendisiti anopenga, mageek kana masayendisiti emakomputa. Linux mumawoko emunhu wese nemaPC. Zvekuti iko kusanzwisisana uye kufungidzira kwatinounza kwakadzika kubva muWindows kunorasika munzira.
Kurega kuva mahwindo uye kusununguka pakupedzisira.
Uye ndezvipi zvakaipa zvauchiri muWindows?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux vs. Windows » Ubuntu installer + kutsemuka
N @ ty, posvo yacho ndeyenharo, ndinofunga zvawanyora zvinotonhorera, kunyangwe zvichisuruvarisa kuti vanhu vasvika padanho rakadai reupenzi (hapana izwi riri nani kuritsanangura) ...
zvisinei ini ndoda kuratidza chinhu chimwe .. pamwe kunze kwemamiriro.
Zvinotaridza kwandiri kuti kana tichida kuparadzira yakasununguka tsika, tinofanirwa kuitsigira 100% ... hazvina basa kutaura zvakanaka nezvechimwe chinhu asi tichishandisa zvinopesana ...
Ndiri kureva "Unofanirwa kutungamira nemuenzaniso" ... zvinondishungurudza zvishoma kuti ndione kuti hapana mumwe wevanhu vatatu vanonyora mune ino blog vanoshandisa yemahara inoshanda sisitimu, uye mumwe chete wavo anoshandisa yemahara webhurawuza ...
Nekuremekedza chirevo chekare kubva kumanyuko: Iyo koni ndiyo chinhu chakakora kwazvo chinogona kuvapo, zvinoitika ndezvekuti windows (isu) yakashatiswa, uyezve isu hatione chero chinhu chinogadzira kana chisina kunyatsonaka, kana kana chisina mabhatani ane transparencies ...
Ini ndinokuvimbisa kuti, kunze kwekunge uchidzidza zvishoma kuti uishandise (nekuti vashandisi veWindows havana kumboshandisa koni kunze kwe ipconfig), zvinoshamisa, zvinonyatsobereka ...
Uye ini handitombo kukuudza kana iwe ukapinda mune imwe nyaya zvishoma uye ukadzidza kugadzira bash zvinyorwa ... ipapo iwe uchaona mutsauko;)
Chimwe chinhu: vanotaura nezvemahara software kana vachingodaidza zita rekuti GNU / Linux, inova OS ... zvinoita senge zvinokatyamadza kwandiri kana vakataurawo nezverumwe rudzi rwemahara software ... semuenzaniso OppenOffice.org kana Gimp .. izvo zvinoshandiswa zvakare pasi pehwindo $, seizvi Unogona zvishoma nezvishoma kupinda mune irwo rusununguko rwekodhi, kana iwe usiri kuda kusvetuka nekukasira (zvese zviri zvemablog eblog iyi, uye neupenyu hwako hwezuva nezuva .. uchiona izvozvo 1 wenyu anoshandisa kureva 6: |)
Kwazisai vese .. Ndinovimba kuti posvo yacho haigumbure .. Ini ndinongoti "isa mabhatiri" .. shandisa mahara masystem anoshanda .. unofanirwa kukunda kutya kwako, uye nekukurumidza zvirinani;) »
Yakanaka kwazvo blog senguva dzose :)
PS: Ndinokukoka kuti ushanyire gulBAC foramu kana uine chero mibvunzo [gulbac.usla.org.ar]
Uku kungoshoropodza kunovaka ... iyo blog yakanaka kwazvo uye danho rekutsanangura Linux yemazhinji noobs inoita kunge barbara kwandiri!
- // ReNa // -
Rena: zvinosuwisa kuti ichafanirwa kutsanangurwa mazuva ese. Vapoteri vari kubasa, kwavanoshandisa Win. N @ ty kubasa zvakare, uye Vhura Suse pamba. Ini windows chero kupi, asi ine firefox, uye ini handina basa kana iri yemahara, ini ndine hanya kuti inoshanda nemazvo.
Ndatenda ReNa, zviri sekutaura kwa esty, isu tinoshandisa zvese mune zviwanikwa nezvangu, uye esty anonzi windowser… A kiss! Hameno kuti wakawira sei pano ...
Handei neProde iyoyo eh !! JJAJJAJA
@esty: usarwa neni naReNa iyo kambani kubva kuface uye ine shamwari hombe: razz:
@Naty: Ini handicharangarira zvakanaka kuti ndasvika sei kublog nekuti yaive nguva yadarika ... pavakaiburitsa ... izvozvi ndakaiverenga kubva kumafeed ...
Ini ndinofunga ndauya kuno kuburikidza neako blog, ndakazviona pawakasaina gulBAC ...
Sezvo ini ndanga ndataura .. iyo posvo yaive yakanaka, kuve kutsoropodza kunovaka, zvakadaro ndinokumbira ruregerero nekuti ndaisaziva nezve basa racho :)
@Naty: iwe unoshandisa OS X kubasa: | ... inguva yekutanga kunzwa ini (vah, mune ino kesi ndakaverenga)
Chaizvoizvo, haufanire kunge uri wekufungidzira, zvese zvakanaka, zvese zvakanaka, asi hapana chinoshanda zvinangwa zana muzana. Ini ndichiri nepfungwa yekuti Linux iri prehistory. Uye kuti iwe unofanirwa kushandisa ese ari maviri OS, usingakundikani
Pablo:… jee rakashata?
Ricardo: Ndinokuombera, ndizvo zvandanga ndichitaura kwenguva yakareba.
esty: Ini ndinokutsigira 100%
Ndiri kunyatso kubhurawuza neChannel, ndosaka iyo OS uye bhurawuza ichiputsa ... chinhu chinoshamisira: |
Unogamuchirwa Ricardo, zvakaoma kubvisa hunhu, handiti? Ini handikwanise kudonhedza Windows yangu ...
Ndichakamirira (semusikana mudiki akanaka wandiri) kuti wizard inoratidzika kwandiri kuti iite zvinhu zvandinofanira kugadzirisa uye ndinodzika pandinotsvaga paInternet uye zvoonekwa: «Pinda koni uye nyora zvinotevera raira »Aaaay.
Zvese zvinouya kubva kwakakura kumashure, dambudziko harisi rekuti vanhu havazive kuti chii chinonzi GNU / Linux uye Mahara software, dambudziko hombe nderekuti havatozive chinonzi Operating System, ndosaka paine mibvunzo yakawanda nezve chii kana zvinogoneka kuti kana kutsemuka, ndinofunga pane zvakawanda zvekuita zvinodiwa nekuti kunyangwe isu tiri vashandisi veWindows isu tinoziva kuti iyi iSystem Inoshanda ipapo ndinofunga kuti zvese zvinotanga uye zvakakosha kuti tizvizive, kana zvisiri kunyangwe iwe gadzira mharidzo yakarongeka ivo vanonzwisisa zvauri kutaura nezvazvo, munhu wese anofunga kuti windows chirongwa chepasirese chakauya pasi kuzotiponesa,
Tarisa, ini ndinoshandisa Linux wajawaja
Mhoroi vanhu vese, nekuda kwaN @ ty nekundidudza mune ino posvo, yandichataura, chaiko kuN @ t uye nzira yatinobatana nayo nePC ndeyekuti mawindows akatidzidzisa sei uye aimboita, kune rumwe rutivi, ivo vanhu vakaita saRena wandisinganzwisise, sei uchifunga kuti kusaziva mashandisiro emahara software kwakafanana neupenzi? Ndinozvitaura nekuti havazi vese vanhu vanogona kutora nguva kuburitsa zvakavanzika zvemahara software nekuti haisi yedu ndima , semuenzaniso ndiri muimbi uye injinjini, ndinogona kwazvo kushandisa software inoshandiswa mukugadzirisa odhiyo, kurekodha nekusanganisa, kana ndichida software inoita izvozvo, ndinotsvaga ichangobuda uye ndinoiisa mumahwindo mukati nzira yakapusa, sekutsanangura kwaunoita nekudzvanya bhatani rinotevera, rinotevera, rinotevera ... Ini handifanire kushamisika kuti software iyi inowirirana neangu mashandiro uye ndinotsvaga imwe ingangodaro isingakwanise zvandinotarisira , kana ndikatenga kadhi nyowani ruzha, handifanire kuita izvi r kugadzirisa vatyairi nevatongi matambudziko, ini handizive kana ndikazvirega ndichinzwisisa, chinhu ndechekuti windows inoshanda uye inoshanda kana zvasvika kune software yakasarudzika mune mamwe marudzi ebasa, nei izvi zvingave zvakafanana neupenzi sekutaura kwaRena Ini ndinotenda kuti munhuwo zvake uye mushandisi wemusango anoda kuti zvinhu zvishande, zvisinei kuti hurongwa hwacho huripachena here kana kwete, kwandiri ndiri kuisa linux pane mumwe wemachina angu nekuti ndakakwezvwa nepfungwa yekusava nehutachiona kana kupatsanurwa kwematambudziko disk, kuve neyakagadzika sisitimu isina kubonderana uye pamusoro pezvose izvo PC inofanirwa kumhanya nekukurumidza ne linux, ini handifarire madrama emahara kana kwete, kuti kodhi yakavhurika, ini handisi programmer kana mugadziri.
Ini ndinofunga ichokwadi kuti vazhinji havanyanye kupisa zvakanyanya mukuziva kuti kune dzakawanda dzimwe nzira. Ivo vanofira mune izvo zvavanazvo uye ndosaka ivo vachirasikirwa zvakanyanya kuravira kuti vadzidze zvakawanda kupfuura zvavanogona. Ini zvakare ndinofunga icho chinhu chakashata kuwana joko pamwe nekutsemuka kwe ubuntu
Ini zvakadaro handidi kusunungura windows, nekuda kwezvirongwa zvakasarudzika mune mamwe mabasa, aungave usingawani mu linux. Ndinovimba rimwe zuva ndinogona kubvisa kutya ikoko nekuti wn vista home premium, inova ndiyo imwe yandinayo, inotora nzvimbo yakapetwa ruviri kupfuura mandiva, iko kutambisa nzvimbo.
Zvinoitika sei kuti hazvizivikanwe kuti Ubuntu haidi kutsemuka, kana mugadziri senge iwo ari muWindows?
Zvakanaka N @ ty kana paine Ubuntu yekumisikidza uye iri yeW $, iri Wubi chausingade kubvaruka: D kunyangwe iwe ungangove wakatozviziva izvo.
Heino imwe Debian
Kana iwe ukati kuyunivhesiti kuti unoshandisa linux, ivo vanokupa iwe ziso rakaipa uye ivo vachatofunga kuti iwe unopenga zvishoma, zvirinani zvinoitika kwandiri nguva dzese; D
@LJ Marín: Zviri pachena, idambudziko redzidzo rinogadzirwa nemakambani epasi rose software asi hazvisi zvekuti vanhu mapenzi (sekureva kwako). Kunyangwe paInternet isu maLinuxers tichizviita kuti tizivikanwe, kunze uko vazhinji vevanhu havana chavanoziva nezve mahara software nekuti hapana akambovataurira.
Pasina kugumbura chero munhu, zvinoshamisa kuti zuva nezuva tinoramba tichikurukura chinhu chimwe chete ichocho. Kunyangwe zvingave zvisingaite senge, kana tikadzora zvakanyanya zvemashoko, tichaona kuti tichiri kukakavadzana pakati pedu: kana linux iri nani pane windows, kana Photoshop iri nani kupfuura Gimp, kuti hapana "yakanaka" software yeiyi mu linux, nezvimwewo.
Ini handigovane zvinotaurwa naEsty: "Ini ndinoramba ndichifunga kuti Linux iri pamberi." Asi, mawindo ndiwo mutemo wekuyera MaSystem Anoshanda? Tinogona kutaura izvi pazvikonzero zvipi? ICHOKWADI CHOKWADI kuti vazhinji (kana vasiri VESE) vashandisi vevashandisi veiyo Inoshanda Sisitimu kuyera vamwe ne "windows mutemo", sekudaidza kwandinoita.
1. Isa zvese neinotevera -> Inotevera -> Inotevera. Kana zvikasaitwa nenzira iyoyo, hazvigamuchirwe.
2. YOSE Software inoshanda muWidnows, kana ikasadaro, haishande.
3. Unofanirwa kushandisa kutsemuka, ndiyo chete nzira yekuisa software. Crack-yemahara software haipo.
4. Zvese zvisiri "Windows" hazvisi zvehunyanzvi, kure nazvo, zvakagadzikana seMicrosoft.
... Uye ini ndinogona kutumidza mamwe akawanda ...
Ngatiregei kuedza kuzvinyengera uye nekunyengera vamwe. Imwe neimwe ine zvayakanakira nezvayakaipira, asi dai zvaive zvepamberi, maSeva mazhinji eGoogle haimhanye neLinux, kana Novell haaizopa kukosha kwazvinoita, kana IBM yaisazoisa mari yakawanda muzvirongwa nezvimwe. kana Bill iye Gates aisazoita hanya NEZVAKAITIKA nezveboka revabiridzi vakagadzira kernel yeiyo Inoshanda Sisitimu. Uyezve, kugadzirwa kweimwe uye imwe yacho hakusi kure nemakumi emakore, kana asiri mashoma makore. Rangarira kuti vanhu vanopihwa izvo zvinoita mari, kwete chimwe chinhu.
Ini ndinoshandisa Windows kubasa (sezvaunozoona mu "comments tip"), asi kumba ndinoshandisa Linux, asi izvo hazviratidze kuti ndinoshandisa 100% Mahara Software. Uye chimwe chinhu chiri 100% zvine musoro uye chisingadzoreki: Iye asingamboshandisa Linux haazive kuti chii, uye iye asingamboshandisa Windows, anondidaidza kudaro, ndinomupa miriyoni yemadhora.
Saka ndokumbirawo, ngatirege kushandisa "windows windows" kuyera vamwe. Zvakafanana newe ugere pachigaro chendarama, uye une simba rekutonga varombo. Kana isu tisingagare muhurombo, zvinonetsa kuti tizive kuti zvinonzwa sei.
Windows iSystem Inoshanda, kwete yiyero yekuyera.
Kunaka kutumira, sekugara n @ ty. Kwazisai vese!
Nehurombo kusaziva zvine chekuita nemakomputa zvakajairika. Nguva dzinoverengeka patinoronga maficha, vanhu vazhinji vanouya vasina zano rakawanda. Kunyangwe vazhinji vanosvika vachitenda kuti Linux ingori console, kana kuti chirongwa chakaiswa muWindows kushandura cube.
Ini pachangu, ndinofunga Windows chikamu chetsika yemunhu wese, ndiko kubudirira kukuru kweMicrosoft. Ndosaka patinenge tichida kuyedza Linux, zviri nani kuzviita zvishoma nezvishoma, kujairira pasina kumanikidza kutama.
Kune rimwe divi, kujoina hurukuro yemakomendi, ndinofunga kuti kusashandisa mahara software hazvienzane neupenzi. Iye anoziva software yemahara, uye achiramba achishandisa software yepamutemo, inyaya yekuti anoshandisa rusununguko rwake kusarudza uye nekuchengetedza sarudzo iyoyo. Ivo vedu vanoedza kuparadzira yemahara software izvo zvatinofanirwa kuita kuita kuti iyi inoshamisa yekuvandudza uzivi izivikanwe kune avo vanozviteerera, uye kuvatendera kuti vave vakasununguka. Zvinosuruvarisa kuona kuti vazhinji vedu vanozvitenda pachedu kubatsira Linux kukura, hapana chavanoita kunze kwekuisa mabhureki pairi, kurwisa chero munhu anosarudza neimwe nzira. Kune nzira dzehukama dzekuparadzira yemahara software uye kukurudzira vanhu kuti vaishandise.
Kwaziso kune vese, ini ndawana iyi blog nemukana, ndakaverenga misoro yakasiyana, uye kunyanya uyu anga ari iye akandibata, sezvo ndaive mumwe wevanhu vaishandisa (ndichiri kuishandisa) Windows ndichifunga kuti mashandiro yainzi MsDOS Chokwadi ndanga ndichiri kuyaruka, uye panguva iyoyo ndaingodzidza kushandisa internet, ... kana uchigona kuseka, ndinobvuma kuti hwaive hupenzi hukuru asi nekutya kundibvunza kana kundiraira zvakanaka kwete kuve muchina mudiki unoita zvese nemoyo uye nyore (JA tevera inotevera… inotevera… inotevera).
Pandakanzwa nezveLinux uye vakandiita kuti ndione kuti zvaive zvevaNerds chete vanofarira kushandisa mirairo uye kuti zvese zvakaitwa pachiratidziri chevatema, chiri chinhu chinotaurwa munzvimbo zhinji ... zviri pachena kuti zvakandiodza moyo uyezve ini handina basa nazvo, aiwa zvaive zvisati zvaitika kusvikira ndaenda kumusangano, kupinda mahara nenzira, nezve OS, ndakakurudzirwa, nhasi ndinoshandisa ese OS, sezvandinoverenga pane mamwe mapeji andinozvizivisa ini .. kusvikira imwe nguva yekugadzirisa ichipfuura ... shandisa iyo yakavhurika ... kana pamwe ingoshandisa windows pazvinenge zvichidikanwa, (nemuchina wako chaiwo ... iro bhokisi chairo) ehe, kune izvo zvidiki zvirongwa zvisingaenderane mu linux (matlab , matcad, inoonekwa uye zvimwe zvirongwa zvemagetsi).
Ndinoziva uchafara kuti kuyunivhesiti kwandinodzidza ndichishandisa Ubuntu iri kutove "fashoni", kunyangwe vazhinji vachikwezva nenyaya yekuti haina hutachiona, asi idanho rakakosha kuona kuti kune zvimwe zvingasarudzika kunze iyo yakajairika yakashandiswa Win ... Tatova nevazhinji vatsva vanofarira kuziva zvimwe ...
Ini ndichave ndichiona iyi blog, ndinoziva kuti ichave nemipiro yakanaka,
@Reoba: «Ndinofunga ndosaka vanhu vasingazive nezveLinux, nekuti kutanga ivo havazive kuti vari kushandisa OS, kwavari ivo vari kungoshandisa komputa yavo.» Zvizere unobvumirana. Kana ndikadzvanya bhatani remagetsi, mushure memavara madiki asinga verengeke iwo makwere machena anofanirwa kuoneka kana zvimwe… komputa yakaputsika: |
Ini ndinoramba ndichidzokorora, kakawanda uye zvakare, kuti vanhu vazhinji vanoziva chinonzi Ubuntu (kunyangwe nekunzwa) asi HASI chinonzi Linux chii. Izvo zvinonyanya kunetsa, kuti izvi zvakapararira zvakanyanya distro kupfuura zano rekuti chii Linux, yemahara software, chishuwo chinoitwa nemunhu wese kugadzirisa uye kugovana ... zvinoita kwandiri kuti nyaya iriko, kune vashoma vanogona kugovana. ..
Ini, kubva muchiitiko chandakave nacho nevandaizivana navo, ndinofunga zvese zvinodzikira kune vanhu vasingazive nezve macomputer, vanongoshandisa komputa vasingafungise kuti chii uye kana paine dzimwe nzira dzechimwe chinhu.
Ndinofunga ndizvozvo chete; Vazhinji vandaizivana navo vanongoshandisa maPC avo vachifunga kuti makomputa ese ari munyika akafanana neavo, havafungi kuti vanoshandisa OS uye kuti kune vamwe.
Ini ndinofunga ndosaka vanhu vasingazive nezveLinux, nekuti kutanga ivo havazive kuti vari kushandisa OS, kwavari ivo vari kungoshandisa komputa yavo.
"Windows iSystem Inoshanda, kwete yuniti yekuyera."
Bachi, kuti ini ndicharangarira nekusingaperi, uri capo kwazvo.
musoro wenyaya wekukurukurirana waive: Uye ndezvipi zvakaipa zvauchiri muWindows?
uye ndichaenda kupindura kuti ..
Ini kubva pamakore masere (gore 8) kusvika gumi nemashanu (gore 2000) ndinoshandisa windows, pakutanga kutamba, wozoverenga uye pakupedzisira kufamba pawebhu rese uye kudzidza graphic dhizaini uye kuronga kwemapeji ewebhu
asi nyaya ndeyekuti: chii chasara nemahwindo?
Ini ndinofunga chikuru chikumbiro inyaya yepinono pc, ndaitya kuvhura FIREFOX, BANSHEE, GIMP NAEEMESENE NENGUVA YAKAFANANA KUTYA kuti muchina ungakiya uye wotangazve
asi kana ini ndichivhura zvese izvo komputa yangu isingatadze kudzikira, ndiyo tsika yandinayo mukati memawindo
ndine ubuntu 8.04
esty, ini handingatombo taura kuti iri OS, asi ini ndinofungidzira kuti nekuda kwekunakidzwa ... pane kusada xD
Ngatione ... nezve vanhu vanobvunza mune rangu basa "Chii chaunopfeka chii?" Ini ndatova nazvo zvekufungidzira ... asi hunhu uhwo mukuru wako, anozivikanwa windowsero, anotendera iwe kuti uise kubuntu pakombuta ye laburo ... kana iri yepasi rose uye ZVESE (Nyangwe sevha ... chii tsvina) windows ... zvakanaka.
Mashoko ake "Oo, zvinoita sezviri nyore" uye neavo veumwe shefu paakaona compiz yakazara zvizere "Ndiye Vista here?" (Kuseka kwangu kuchiri kusheedzera xD) ...
Linux haina kunaka nekuti ndeye mahara, kana nekuti, senge Ubuntu, yemahara.
Izvo zvakanaka nekuti ndeimwe nzira yekutarisa chimwe chinhu chakanakisa sekomputa.
Kana zvese zvikaonekwa nebhuruu BSOD firita saka zviri pachena kuti mamwe ese mavara akarasika. Linux inongokuudza chete: "Tarisa, heino mamwe ese mavara, uye kwete chete ini handibhadharise kuti uvaone, asi unoasanganisa sezvaunoda."
Uye kwandiri, mukuwedzera, kushandisa chimwe chinhu chiri 100% yemahara uye zviri pamutemo (Izvo zvinoenda kune esty) nekuti icho chirevo chemitemo.
Zvino, kana ini ndiine windows vice ... kwete. Kupfuura chero chinhu nekuti mushure memakore matatu ekushandisa chete Linux, unorasikirwa netsika dzakaipa.
Ini handizvidzire, handichenese iro registry, ndinopasa mavhairasi, uye ndakadzidza kugadzirisa matambudziko angu kana kutsvaga mhinduro, idzo muWindows "dzinogomera uye fomati".
Kune rimwe bhendi, rwiyo rukuru.
Izvo zvekuisa linux kuna boss zvaitaridzika kunge zvinoshamisa kwandiri
Zvakanaka N @ ty, pachokwadi ini ndawana iyi ndima inoita senge yechokwadi nezve Linux seYinoshanda Sisitimu
Linux haisi yekushandisa system. Kwete, zvirinani nepfungwa yakaoma. Linux ingori kernel. Saka nekudaro, haina kusanganisira maturusi akadai sevaturikiri vemirairo, macomputer, editors, maraibhurari, graphical interfaces, nezvimwe.
Pindura kuna Kal
Yakatorwa kubva ku Wikipedia
«Linux (inozivikanwawo seGNU / Linux) ndiyo Unix-senge inoshanda sisitimu iyo inogoverwa pasi peGNU General Public License (GNU GPL), ndiko kuti, ndeye mahara software. Zita rayo rinobva kuLinux Kernel, yakagadzirwa kubva muna 1991 naLinus Torvalds. "Inoshandiswa zvakanyanya mumaseva uye makomputa,  uye inotsigirwa nemakambani akadai saDell, Hewlett-Packard, IBM, Novell, Oracle, Red Hat, uye Sun Microsystems."
Kana tichizotsvaga tsananguro ...
Chokwadi iyo wiki zvakare ichave neinongedzo kune iyo microsoft SI (Inoperative Systems) xD
Huye, chaizvo, tsika dzekupinda windows dzakashoma, nekuti mumakore maviri ini ndakadzidza kutsiva ese mashandiro ayo nemahara maapplication
uye mira zvichienderana nemahwindo kungopinda kuti udzidze nezvezvikanganiso uye mashandiro ekugadzirisa matambudziko eshamwari nevatengi vachiri vanovimba nazvo
Zvakanaka, mandiri, Linux yakandidzidzisa neimwe nzira yakadzama yekudzidza kushandisa sisitimu yekushandisa uye kupa yega sisitimu uye yega sisitimu kurapwa kwayinofanira kupihwa.
iwe unodzidza kuona izvo zvinonzi murphy mumutemo wake kuti iro dambudziko chairo nemakomputa ndivo vashandisi uye kurapwa kwavanovapa
Linux yatobvisa mamwe manomano andaimbove nawo kana ndichida kuteerera kumimhanzi ndine nziyo dzisingaverengeke pane shiri yenziyo kana yekupedzisira.fm saka ini handicha dhawunorodha mimhanzi yakawanda sepandaive pa windows
kana ndikadzora rwiyo rwushoma ndunozviita naFrostwire kana neshiri yambotaurwa
Kana ndichida kubata maemail ini ndinozviita kuburikidza nemutinhiro unondipa rusununguko rwekutumira akati wandei panguva imwe chete, pisa cd yandinofanira kubvuma kuti mu linux ndinongoshandisa iyo dvd cd kuverenga kuona mamwe mafirimu haina kushandiswa nekuti zvese zvinotorwa nemaneja wepakeji asi ini zvakare ndine nero mune yayo vhezheni ye linux kana brasero
windows yekushandisa kwangu ndoga ndinoshandisa chete kuburikidza nemuchina chaiwo kuti ushande nefotoshop nguva nenguva asi ini ndave kutopa masevhisi ayo zvakare nekuti rese dhizaini basa ini ndinoita zvakanyanya kupfuura zvese zviri mune zvine simba Gimp, scribus kana inkscape kuitira ye vector mifananidzo uye blender kana bhuruu hove kana mupepeti htlm / xml sbreem kurongedza mumapeji ewebhu
ziso handina kana chandinopesana nemahwindo kana ini chandinoshoropodza kana ini chandinoona senge chakaderera uye kwete chakanyanya kuchenjera anochishandisa nekuti nemahwindo ndakadzidzawo zvinhu zvakawanda zvakandibatsira munzira
Ndinokorokotedza avo vanoishandisa uye vanonzwisisa
uye ndakadzidza kusaseka avo vasingazive zvinopfuura izvi
Zvakanaka kana chimwe chinhu chiri chokwadi ndizvozvo
windows inogadzirwa nevanhu vanoziva kune vanhu vasingazive hazvo chimwe chinhu
uye linux inogadzirwa nevanhu vanoziva kune vanhu vanoziva chimwe chinhu
Ndokusaka iwe uchiona izvo zviitiko zvevanhu vanogadzira paradigm yekuti linux inoda kutsemuka here kana iri windows application
kana ivo vanoona compiz fusion uye vanofunga kuti chinhu chekuona
mutsauko mumubvunzo uyu ichave mhinduro yako yehana uye yekudzidzisa kune avo vanoibvunza
kudzidzisa kuti linux isoftware yemahara uye sevaya vanoda kuenderera ne windows zvakare vadzidzise kuti vanokwanisa kushandisa mahara maturusi mukati mayo zvakare uye vanomira zvichienderana neanotsemura uye madhimoni maturusi
saka ivo vachamira zvakare zvichienderana nedzimwe tsika idzo kazhinji dzisina basa
Ndinovimba chirevo changu hachigumbure kwauri, kwaziso
Rakanaka peji peji vakomana ndinokukorokotedzai
iyo koni haifanirwe kutyisa
zviri pamutemo akadaro
Chaizvoizvo shinda inoti
Musoro: ubuntu serial
Tumira: pane chero munhu anayo here? Sei ndakairodha pasi ndikandiudza kuti imuedzo, pane mumwe munhu anonditambidza mutswe kuti izere?
Pindura ku legalizenla
aaaaaaaaa, flavio ... iwe kana iwe uchikwanisa kuona iyo folda muforamu ... aaa, iwo mazuva ekare kudzidzisa kuenzanisa ... inguvai.
HAHAHA !!, chokwadi icho chinyorwa ichi chakandiita kuseka zvakanyanya, ndinokuudza kuti nekutenda kuna Mwari neLinux pano muVenezuela zvinoenderana nemutemo 3390 wakapihwa nemutungamiri wenyika, ese masangano eruzhinji anofanirwa kuenda kune yemahara software, uye maererano nezvandakaona mune akati wandei Masangano eruzhinji ndinotenda kuti 50% yemasangano akatotama, uye imwe 50% yave kuda kutama sezvo chikonzero chekunonoka kwavo kuri kuita mamwe maapplication ekuchengetedza kana kuti kureva kuti, vanovimba neWindows. Iyo distron iyo inonyanya kushandiswa muno muVenezuela ndeye ubuntu uye ayo anotora uye madhiri
Pindura kuna gUARUS
Nehurombo, iri danho rekusaziva rakajairika nekuti kuchine huwandu hwakanyanya hwekusagona kuverenga. Pasina kuenda kure zvakanyanya, zvakajairika kuona mumwe munhu achinongedzera kuIE icon uye oti iyi ndiyo Internet, kwete kuti inokutendera kusecha paInternet asi kuti ndiyo Internet.
Pindura kuna Tom
Ndine urombo GUARUS, komendi yako yakaenda kune spam uye ndakangozviona
Kwete, ndinofunga kuti IE ine bhagi yakakosha, uye ndipo paunoudza windowsero kuti ashandise opera kana firefox, kuti danho rayo rekuchengetedza rinogadziriswa uye rakavimbika, uye ivo vanokuudza iyo «Yei? Kana ini ndatova nehutachiona ... »¬¬U Ok ... kana ukadaro ...
Rimwe zuva musikana wangu akandibvunza chaizvo zvandaishandisa komputa ... uye ini handina kunzwisisa kuti kwandiri kuve pamberi pebhokisi rechokwadi ndichiisa gentoo (iyo inondikwezva zvakanyanya iyo system, sezvavanofanira) kuona inokurumidza sei, chikamu cheicho chandinoifarira, kuti kutarisa mafoto nemavhidhiyo kwakanaka, asi kutenderedzwa mumatumbu ehurongwa uye kutyora nyanga dzangu kuti ndione kuti chinhu chinoshanda sei chinonakidza.
Kune avo vanhu, ini ndaimboedza kuita kuti vanzwisise kuti Linux inoshanda futi, kana kunyange zvirinani ... ikozvino zvapera.
Ivo vanoda windows nekuti ivo havafunge kudaro. Zvakanaka, zviri pachena kana paine kukundikana kwesisitimu ini handigadzirise imwe, kunyangwe iri nyore. "Ndine urombo asi ndinoshandisa linux, handibvi pakutsigirwa neMicrosoft."
Zvinogona kutaridza kunge zvinopesana nemweya wakasununguka weGNU nezvose izvozvo, asi zvakangofanana nekutsanangurira bhokisi remapiritsi kuti nei "mimhanzi" yemagetsi isiri mimhanzi. Ivo havazvinzwisise, uye havadi kuzvinzwisisa.
Hotmail, IE, facebook, wmplayer uye imwewo idiocy. Kubva ipapo haufambi navo.
Uye usavaudze nezve freeware, kuti ivo vanopaza zvirongwa, zvingave zvichishayikwa zvimwe ...
Saka… zvei? Hakusi kusaverenga nekuverenga, dai zvaive, dzidzo ingadai iri nzira. Kuramba, izvo zvinoita kuti zvinyanye kutonyanya.
Uye saka hazvina maturo.
Ndine urombo kana zvichinzwika zvine hukasha, asi huchi haugadzirirwe muromo wedhongi, pamwe tinofanira kushandisa mac machenjera, pane kuyedza kugonesa mushandisi kuti linux irinani, rega vanhu varambe vachimedza tsvina yeMicrosoft apo iyo vedu isu tinoshandisa Linux ramba uchirarama nemufaro.
Uye kuseka neinotevera «blaster», hongu ... xD
Muurayi (Pepe) akadaro
Mhoroi, ndinobva kuMexico uye ndinobvumirana nezvinotaurwa naRena, ndanga ndichishandisa GNU / Linux distro kwenguva yakati, handisi nyanzvi huru, asi ndinofunga tinofanirwa kutumidza zvinhu sezvazviri, ndinoreva Linux (parizvino) haisi Anoshanda system, pane distro ine iro zita asi harisi, risati ragadzirwa kana iri sisitimu inoshanda nekuti yaibatana neconsole uye kwechinguva ine mashoma magirafu, asi kana GNU yakasvika (inova mashandisirwo uye koni yacho), Haisisiri yekushandisa system, chandiri kuda kujekesa ndechekuti kana tikadaidza Linux ku distro "x" takakanganisa, tichafanira kuti titi GNU / Linux uye kana isu tinoziva zita reiyo distro, taura chimwe chinhu senge "zita re distro + linux», ndinovimba kuti ndisazogumbusa chero munhu asi ini ndinovimba neizvi sezvo mune peji raRichard Stallman zvinouya seizvi uye mune inoremekedzeka internet tsananguro….
Pindura Mutongi (Pepe)
Yakanaka kwazvo posvo. Uye ndakaverenga akati wandei.
Ini ndangoita hurukuro yakafanana chaizvo neyawaive uine wawakadzidza naye NOMUDZIDZISI WEKOMPUTA.
Zviripachena aive aine imwe pfungwa zvakadaro, nyaya ndeyekuti akaramba achitaura kuti WINDOWS EASIER. Akanga asingatozive kuti maq server yaitsigira network yaaishandisa yaimhanyisa DEBIAN.
Kunyangwe ndaiziva kuti Linux yaive OS ...
Kusiya izvi parutivi, iyo yekuisa yekuisa system (kuburikidza nemapakeji) uye kushandisa application (isina nzira, chete mirairo), yakawedzerwa kune nyore kweAPITITUDE (Ini ndinoshandisa iyo koni, zvinoita kunge zvirinani kupfuura iyo graphical nharaunda) zvachose parutivi kubva kuisirwa + kutsemura kunoda mahwindo. Muchokwadi, ini ndiri kutoshamisika nehuwandu hwemahara software inosangana nezvandinoda.
Nekudaro zvinhu zviviri izvo linux risingavhare izvo ndeizvi:
1) Kushandisa kwemubatanidzwa. Izvo hazvigoneke kuwana yehunyanzvi sevhisi (zvirinani munyika yangu) iyo inonzwisisa zvakawanda nezve linux nekuda kwe "hwindo chikamu" iwe chawataura. Ndiri kureva chete padanho rekambani, rutsigiro rukuru maererano neakakura ruzivo mambure.
2) Imwe yemashandisirwo akanyanya kukosha emakomputa: MITAMBO. Mitambo inonyanya kukosha (yakawanda inomhanya newaini kana cedega) haimhanye natively paLinux. Iyo chete kambani yandinoziva yeiyo yagadzira .run mafaera ekumhanyisa mitambo yavo vasina kutevedzera iwo ID Software. Pane izvi vagadziri vanofanirwa kushanda zvishoma zvishoma (iri kungo wedzera iyo .run faira uye imwe zvinyorwa faira ine mirayiridzo yekuti ndeapi mafaera ekuteedzera ku disk dhairekitori, sekuisa kwandakaita iyo ID mitambo).
Panguva ino ndinofunga kuti chinhu chinofanira kurasika. Iyo yekudyara software yakanaka kwazvo uye kana ikashandiswa zvakanyanya, kuenderana kunorasika mu linux masystem, ndosaka chishandiso cheWine, Kana pachinzvimbo ivo vakagadzira iwo anomhanya mafaira kana avo .rpm kana .deb kana .package mapakeji, yaizogadziriswa. .
Ivo vanozvipotsa, asi isu tinodaro.
Ndinokukorokotedza iwe zvakare nezve iyo posvo.
kubva kubuntu 8.04 Hardy Heron
ZVIMWE ZVINOKOSHA !!! XD
Ini ndanga ndatopotsa dzimba dzekutsanangurira dzaNaty, makorokoto xDDD
Linux yakanakisa, chokwadi ndechekuti ndakatanga mumwedzi mitanhatu yapfuura uye yaenda zvakanaka, kunyangwe ini ndichiri ndakasungirwa kumahwindo nekuti ini handigone kushandisa AutoCAD neCivil CAD mu linux T_T
Asi kunze kweizvozvo, ini ndinoshandisa yakawanda linux, pachokwadi ini ndawana mapurogiramu anga asingashande nemawindows 7 (ndakaedza kumhanya navo semurairidzi uye mukuhwina xp mamiriro ekuenderana) asi muwaini vakashanda XD
kukunda kukuru !!!
Pindura kuna Mateo
Ndine chinzvimbo chepachena chirongwa chinoshanda zvakakwana neDWG; iyo PDF inogona kugadziriswa, kuti ndinogona kubata yangu GANTT madhayagiramu, uye kuti maspredishiti anogona kusefetwa nesimba rekunaka …… .. Ndiri kubatwa neiyi linux mint imbwa !!!! how the hell uninstall my win 7 LPM !!!
Pindura kuna Maximiliano